मादक-पदार्थ लागु-औषध अभिलाषा अपराध कारागार निराशा मृत्यु
"किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो" (रोमी ६:२३)
तथ्यहरूको सामना गरौं। लागु-औषध, मादक-पदार्थ, र अनैतिकता जस्ता ती भयानक राक्षसहरूले परमेश्वरले बनाउनुभएको सौम्य र असल कुराहरूलाई सङ्कटमा पार्दैछन्‌ र विनाश गर्दैछन्‌। सिकारीले आफ्नो पासोमा सिकार पारे जस्तै, यिनले जवान र वृद्ध दुवैलाई आफ्नो पासोमा पार्दैछन्‌।
आजको समाजमा ठूलै बज्रपात परेको छ। लागु-औषध, मादक-पदार्थ, र अनैतिकताको अभिशापले धेरै मानिसहरूलाई, अनन्तको विनाशतिर अघि बढाउँदै, तर्काएको छ र लङ्गर विहीन बनाएको छ। यी दुर्व्यसनको सवालमा मानिसहरू सजिलै आफ्ना सङ्गीहरूको साथसाथै सञ्चार-माध्यमहरू, पत्र-पत्रिकाहरू, र टेलिभिजनका विज्ञापनहरूद्वारा प्रभावित हुन्छन्‌। मानिसको मन-मस्तिष्कलाई यति हदसम्म आक्रमण गरिएको छ कि उनीहरू अन्योल र निराशाको भुमरीमा पुगेका छन्‌, परिणामस्वरूप आत्मिक र शारीरिक विकृतितिर उन्मुख भएका छन्‌।
यस्तो किसिमको निकृष्ट नैतिक व्यवहारको निम्ति कसलाई दोष दिने? युवा पुस्तालाई? पक्कै होइन। धेरैजसो बुवाआमाहरूको आफ्नै अनैतिक जियाइको कारणले गर्दा उनीहरूले युवा पुस्तालाई यस्तो किसिमको पाप कर्ममा फस्न मान्यता दिएका हुन्‌। आमा बुवाहरूले आफ्ना भ्रष्ट संवेदनाहरूलाई जाँच गर्न चुकेका हुनाले आफ्ना बच्चाहरूलाई पियक्कडको र लागु-औषध दुर्व्यसनको विनाशको परिचय दिँदैछन्‌ भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत छैनन्‌। परमेश्वरको नैतिक सिद्धान्तहरूलाई बेवास्ता गरेर तिनलाई लत्त्याइएका छन्‌। एउटा चर्को चीत्कार स्वर्गसम्मै पुग्नुपर्छ। हामीले कसरी हामी आफैँलाई र हाम्रा बच्चाहरूलाई बचाउन सक्छौं?
हाम्रो समाजले नागरिकहरूको आवश्यक गुणस्तर त्यो बेलासम्म उत्पन्न गर्न सक्दैन जबसम्म मादक-पदार्थ र लागु-औषधलाई सहन गरिन्छ, अनि बुवाआमाहरू, शिक्षक-शिक्षिकाहरू, र प्राध्यापकहरूको लचकताद्वारा त्यसलाई उत्साहित गरिन्छ। मादक-पदार्थको सेवन जन-नैतिकताको ठूलो भक्षक हो; यसले निर्णय-शक्ति, चरित्र, र जीवनलाई ध्वस्त पार्छ। यसले घर-परिवार भाँड्न र विभाजन गर्न योगदान पुर्याउँछ, जुन परिवार मानव जातिको आशिषको निम्ति परमेश्वरको पवित्र एकाइ हो।
मादक-पदार्थको घातमाथिको अर्को घात भनेको बढ्दो अवैध लागु-औषधको प्रयोग हो। यी लागु-औषधहरूको खराब प्रभावहरू यसका कुनै पनि कथित लाभहरूको तुलनामा ज्यादै प्रबल छन्‌। लागु-औषधहरूको प्रयोगले कमजोर निर्णय-शक्ति र मानसिक मतिभ्रमलाई प्रश्रय दिन्छ। लागु-औषध दुर्व्यसनीहरूले स्वीकार गर्छन्‌ कि यसको लत भनेको मानसिक, शारीरिक, र आत्मिक रूपमा हुने मृत्यु यात्रा हो। निको पार्न नसकिने मस्तिष्क घात, हत्या, र आत्महत्या जस्ता कुराहरू प्रायः यी दुर्व्यसनका दुःखद परिणामहरू हुन्‌।
पूरा लेख: लागु-औषध, मादक-पदार्थ, र अनैतिकताको सम्बन्धमा के हो त?
मानिसहरूको जन्मजात पापको कारणले गर्दा, उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा नै शैतानले रचेको प्रवृत्तिहरू र उत्कण्ठाहरूलाई अनुसरण गर्छन्‌। यस अवस्थामा शरीरले अप्रतिबन्धित सन्तुष्टि खोज्छ। यौन अनैतिकताले अभिलाषाको आगोलाई निभाउँदैन—यसले त अझ घ्यू थप्छ। जसरी मादक-पदार्थको समस्याको निम्ति समाधान ह्विस्की हुन सक्दैन त्यसरी नै अभिलाषाको निम्ति उपचार यौन क्रियाकलाप हुन सक्दैन। सत्यता यही हो कि हामीले हाम्रो अभिलाषासँग सामना गर्नुपर्छ। जब अनन्तसम्म रहने हाम्रो आत्माले परमेश्वरको उद्धार प्राप्त गर्छ, तब यसले उहाँको व्यवस्थाहरूलाई सम्मान गर्न खोज्छ।
व्यभिचार, पर-स्त्रीगमन, समलिङ्गी सम्बन्ध, र जनावरहरूसँग राख्ने यौन सम्पर्क परमेश्वरको वचनमा प्रतिबन्धित गरिएका छन्‌ (लेवी १८:२३; गलाती ५:१९-२१)। अनैतिकताले पीडा, मर्मभेद, बिजोग, दोष, र यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोगहरू ल्याउँछ। शुद्धताले स्वाभिमान र प्रतिष्ठाको भाव ल्याउँछ। उच्च सैद्धान्तिक व्यक्ति दयनीय रूपमा जिउँछ र निम्न नैतिकता भएको व्यक्ति आनन्द र सन्तुष्टिको जीवन जिउँछ भनेर सोच्नु ठूलो भुल हो।
अनैतिकताको यो अन्योलग्रस्त परिस्थिति र आत्मिक अन्धोपन, पाप र निर्लज्ज भक्तिहिनताको माझमा पवित्र बाइबलले नैतिक व्यवहारको निम्ति उच्च स्तर तोकेको छ। सहि र गलतको विषयमा बाइबल नै निर्णायक र अनन्त अधिकार हो।
मानव जातिको वृद्धि भएको होस्‌ र पति र पत्नी बीचको वैवाहिक बन्धन मजबुत भएको होस्‌ भनेर परमेश्वरले मानिसलाई यौनको चाह हुने गरी सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले यो इच्छा आधिकारिक विवाहभित्र मात्र पूरा हुनको निम्ति मन्जुर गर्नुहुन्छ। “सबैका बीचमा विवाहचाहिँ आदरणीय होस्‌, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटुलिओस्‌, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ” (हिब्रू १३:४)।
रोमीको पुस्तकमा, प्रेरित पावलले समलिङ्गी सम्बन्धमाथि परमेश्वरको इन्साफको बारेमा लेख्छन्‌। “यसैकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनुभयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्ना स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे, र त्यसरी नै स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक-दोस्रातर्फ कामुकताको जलनमा पुरुषहरूले पुरुषहरूसितै निर्लज्ज काम गरे, र आफ्नै शरीरमा आफ्ना कसूरको उचित दण्ड भोगे। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनुभयो” (रोमी १:२६-२८)। सदोम र गमोराको घृणित कार्य यही थियो, र यो कार्यले गर्दा तिनीहरूमाथि परमेश्वरको इन्साफ ल्यायो (उत्पत्ति १९)। धर्मशास्त्रअनुसार, यदि हामी यस्ता पापहरूमा अभ्यस्त भएर बाँच्छौं भने पवित्र आत्मालाई हाम्रो हृदयमा प्रज्वलित राख्न असम्भव हुन्छ।
यदि तपाईं जीवनमा साँच्चै खुसी हुन चाहनुहुन्छ र आफैँसँग र परमेश्वरसँग शान्तिमा रहन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं उहाँसँगको सङ्गतिमा आउनैपर्छ। तपाईं पापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पहिचान र स्वीकार गर्नुहोस्‌ र तपाईंको दोष बोकेर येशू क्रूसमा मर्नुभयो भनी विश्वास गर्नुहोस्‌। विजयले तपाईंलाई पर्खँदैछ!
जसै तपाईंले आफ्नो हृदय परमेश्वरसँग खुल्ला गर्नुहुन्छ र आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईंलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। “यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्‍यौं भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ” (१ यूहन्ना १:९)।
आफ्नो मुक्तिदाता येशूलाई आफ्नो समस्त जीवन स्वैच्छिक रूपमा सुम्पनुहोस्‌, र उहाँको वचन र पवित्र आत्मालाई साँचो आज्ञाकारितामा अनुसरण गर्नुहोस्‌। परिवर्तित जीवनका आशिषहरू भनेकै शुद्ध विचारहरू हुन्‌, यिनै विचारहरूले हाम्रो कार्यहरू र क्रियाकलापहरूमा गजबको परिवर्तन ल्याउँछन्‌। जीवनका समस्याहरूसँग सामना गर्न चाहिने साहस र तपाईंलाई प्रहार गर्न सक्ने परीक्षाहरूमाथि विजय हुन चाहिने शक्ति ख्रीष्टले तपाईंलाई दिनुहुनेछ। येशूले बोलाउँदै गर्नुहुँदा अहिले नै उहाँकहाँ आउनुहोस्‌। “जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज। उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट” (यशैया ५५:६)।